Thwebula FBReader 2.5.7 isizulu – Android – Vessoft
Isistimu esebenzayo: Android, Windows
Isigaba: Abafundi be-E-book
Ikhasi elisemthethweni: FBReader
FBReader – a isofthiwe ukufunda izincwadi electronic ngetakhiwo letehlukene. FBReader ikuvumela ukuba thwebula izincwadi ngezilimi ezahlukene kusukela imitapo inethiwekhi noma ezitolo. Isofthiwe kudala ngokuzenzakalela okuqukethwe ncwadi, uhlela hyphenation futhi ngekhanda isikhundla samanje embhalweni emva okuphetha encwadi yeBhayibheli. FBReader kwenza ukuhlunga izincwadi emtatsheni yayo siqu umlobi, ukuhluza noma uchungechunge. Futhi software isekela ukuvumelanisa iqoqo lezincwadi kanye namanye amadivaysi. FBReader iqukethe inqwaba amathuluzi ukulungisa izilungiselelo software for izidingo umsebenzisi.
Usekela ngetakhiwo letehlukene
Ukubheka amafayela kusuka ezinqolobaneni
Downloads izincwadi kusukela imitapo enethiwekhi ezitolo
Ukuvumelanisa namanye amadivaysi
Control iqoqo lezincwadi
Amazwana ku FBReader
FBReader software ehlobene
Kuyabonakala – uhlelo lokusebenza lokulanda nokulalela ama-audiobooks. Isoftware ifaka umtapo wezincwadi omkhulu futhi isekela izindlela ezahlukahlukene zokubuyekezwa kwazo.
I-Amazon Kindle – isoftware yokubuka nokulanda ama-eBooks esitolo esikhulu sezincwadi. Uhlelo lokusebenza liqukethe izilungiselelo ezahlukene zokuqinisekisa ukufundwa okuntofontofo kunazo zonke.
Ngaphezu Kalula ukucinga bese ufunda izincwadi. Isofthiwe kuhlanganisa umtapo enkulu izincwadi zihlukaniswe izinhlobo ezahlukene.
Imibhalo Yokuthi Uhambe – isoftware yokwakha nokuhlela imibhalo yombhalo, amaspredishithi, izethulo nokubuka amafayela wePDF.
I-Mindomo – isoftware yokubona imibono eyehlukene futhi ihlele ukwenziwa kwemisebenzi ngendlela yezinhloso ezinengqondo, zomuthi nezinye.
I-Microsoft Office Mobile – isoftware esemthethweni yokusebenzisana nemibhalo ye-Word, Excel ne-PowerPoint evela kuMicrosoft. Uhlelo lokusebenza luqukethe iqoqo eliphelele lamathuluzi wokuhlela imibhalo yezinhlobo ezahlukahlukene.
I-AVG AntiVirus – isoftware enamandla yokulwa namagciwane ukuvikela insiza ekulweni namagciwane ezinhlobo ezahlukahlukene. Isoftware iqukethe imisebenzi eminingi namamojula ukuthuthukisa ukusebenza kwensiza.
Ithuluzi ukubukela ividiyo on the service popular YouTube. Isofthiwe kwenza ukubuka ividiyo e izinga okusezingeni ngokusekelwa of engezansi.
I-Mobdro – isoftware yokubuka ukusakazwa kwevidiyo ngezihloko ezahlukahlukene ezivela emhlabeni jikelele. Isoftware inika amandla ukuthola ividiyo yokusakaza ngezilimi ezikhethwe ngumsebenzisi.